Home Wararka Cabsi Xoog leh soo Wajhaday ciidankii Gedo la Geyey , kadib Markii...
Cabsi Xoog leh soo Wajhaday ciidankii Gedo la Geyey , kadib Markii Qaar laga dilay.
Reading Time: 4 minutesMaxay tahay cabsida soo food saartay ciidanka la geeyay gobolka Gedo
Dowladda federaalka ayaa ciidamo xooga dalka Somaliyeed ah u daad gureysay gobolada jubbooyinka si ay ula dagaalaan ciidanka Jubbaland oo ay ka wada tirsan yihiin ciidanka xooga Dalka Somaliyeed ee Jubaland ku sugan si beesha Marreexaan loogu qabto jubooyinka.
Ciidankaan loo diray Gobollada Gedo iyo Jubada hoose waxaa xoogiisa laga raray agagaarka magaalada Muqdisho iyo labada Shabelle, waana ciidan u badan Beelaha Hawiye iyo tiro Raxanweyn ah oo lagu kabay. Muuqaalkaan naxdinta leh waa wiil dhallinyaro ahaa oo u dhaartay dalkiisa inuu cadow ka difaaco, hasa yeeshee la dilay markii Gedo oo uusan weligii arag la geeyey si xabadda loogu hormariyo.
Dowladd federaalka ayaa waxay arrintaa ka leedahay tahay ujeedooyin isku huwan sida xogta lagu helay kadib markii horumihii ugu horreyey ciidanka oo halkaas la geeyey ay soo wajahday cabsi xoogan. Waxaana laga dilay laba ka mid ah oo midi uu ahaa wiil aad u yar oo Xamar looga waday inuu difaac dalkiisa yahay waxa loo wadao. Hadaba waxay ka leedahay ujeedooyinkaan
Ujeedada Kowaad ee dowladda waxay tahay in ciidaankaas Xamar laga fogeeyo kadib markii ay maalmo dhoweyd uu soo baxay guux ah in MW hore Shariif Sheekh Axmed uu Idaacadaha ka sheegay in dowladda ay joojiso falalka khaldan ee ay ku kacayso, haddii kale loo bixin doono sidii loo bixiyey kuwii ka horreeyey ee dhibaatada la yimid. Arrintaas oo marag ma doonto ahayd madaxda dowladda sida Farmajo, fahad iyo Kheyre waxay ku abuurtay cabsi weyn maadaama ay degaannada Shabeelloyinka iyo Xamar ay ku sugnaayeen ciidan si fiican u tababaran oo xoogga dalka Somaliyeed ah, ciidankaas oo laga dareemay inay u dhega nugul yihiin Madaxweyne Shariif. Waxaa durbadiiba Maalin cad la toogtay mid ka mid taliyayaashii ciidankaas oo geesinimo aad ah lagu sheegay.
Taliyahaas oo lagu magacaabi jiray Maxaadeey Saleymaan waxaa uu ahaa taliyaha Ciidanka gorgor. Waxaana loo aaneyaa inuu dilkaas ahaa ulakac lagu bar tilmaameedsaday Taliye Maxaadey oo aad ugu dhowaa MW shariif. Hasa yeeshe MW shariif iyo kooxdiisaba waxba kama soo qaadin dilka taliyaha. Haddaba Farmajo iyo Fahad waxay is tuseen in Ciidankan Xamar laga fogeeyo oo la geeyo goob aysan ka soo gaari Karin Xamar, si magaalada Muqdisho iyo hadii Sheekh Shariif markale hanjabo loogu qabto gacan bir ah.
Ujeedada labaad waxay tahay MW Farmajo iyo Fahad oo abtiyaaloo loo yahay oo aan rabin inay ciidan reer Gadood ah iyo kuwa Jubaland toos isugu dhacaan taas oo dhaawac iyo dhimasho badani ay soo gaari karto Mareexaanka waana sababta ciidankan Hawiyaha ah loo geeyey goobaha hore ee ay xabaddu ka bilaaban karto haddii uu Farmajo amaro in Kismayo iyo Bu’aale midood ama labadoodaba lagu duulo si loogu qabto beesha Mareexaan Jubbooyinka.
Ujeedada Seddexaad ayaa ah in Mareexaanku ay helaan hub casri ah oo haddaba halkaas loo daabulayo si haddii xaalku xumaado ay isu difaaci karaan. Dhab ahaan Mareexaanka kuma dhacaan inay jubooyinka kaligood weeraraan sida ay ciidanka Jubbooyinka oo Ogaadeen u badan aysan iyaguna ugu dhicin inay Gedo qabsadaan, waanaa sababta loo geeyey ciidankaan Hawiyaha ah. Waxaa Itoobiyaan uu xadka ka soo tallabo oo ay ka qeyb qaataan dagaalkaas iydoo dahaar ama dabool looga dhigayo in Jubbada dhexe looga xoreynayo shabaab.
Haddaba Waa maxay Cabsida soo wajahday ciidanka Hawiyaha ah ee la geyey?
Ciidankan inkasta oo uu yahay ciidan si fiican u tababaran oo dhallinyaro u badan, ahna ciidanka xooggiisa loogu talagalay in caasimadda lagu difaaco ayaa waxay hadda dhexda ay u galeen ciidan laba beelood oo iska xiga Ogaadeen iyo Mareexaan, degaan iyo dowlad goboleedna isku haysta balsa ay dhinac dowladda la jirto. Sarkaal ciidanka la geeyey ka tirsan ayaa waxaa laga soo wariyey in ay qabaan cabsi ah inay qabsan karto dhibaatadii dagaallada sokeeye ka hartay oo ay dhexda u galaan Marexaan iyo Ogaadeen haddii ay doonaan iska xigasan kara, taasina ay keeni karto in la gumaado iyaga oo horay iyo gadaal laga weeraro.
Dalka Somaliya oo ay dagaallo ahli ah ka dhaceen sida aan ka warqabno wali lama sameyn dib u heshiisiin dhab oo beelaha ay wax kala gaareen ama beelo isku dulmiyey siyaasad lagama heshiin, “marka aano qabiil oo horay ay ciidan Hawiya ah u galeen ayaan ka baqeynaa in annaga naloo dhibaateeyo” ayuu yiri sarkaal goobtaas ku sugan . “Waxaan diyaar u nahay inaan shabaab dhulka ka xoreyno laakiin inaan Mareexaan iyo Ogaadeen u kala hiillinno ma rabno danna qaranka kuma jiro” ayuu ayuu mar kale yiri Sarkaalkaas oo aan magaciisa u qarinnay sababo amaankiisa la xiriira darted isagoo ku sugan halkii la geeyey.
Waxaa muuqata in dowladdu NN ku talagashay in dalka loo horseedo dagaallo iyo dhiig inuu mar kale ku daato, waana khater in maanta laga hortagaa ay dhib yar tahay in berri la sugo marka ay ku fiddo goobo badan ama uu Farmajo noqdo kalitaliye arxan laawe ah wax badan halaaaga.
Waxaan mar kale leenayahay Madaxweyne Is casil aan ceymanee.